> Resource> iPhone> Ihe niile ị na Mkpa Ịmata tupu ịzụrụ a eji iPhone
Ọ bụ ihe ijuanya na iPhone bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu iberibe nke oge a technology n'oge. Ebe ọ bụ na mbụ ya ntọhapụ na 2007, ndị a revolutionary smartphones nwere adịkwaghị ahịa na ihe kpatara ya bụ doro anya: ha ikpokọta dị ka ọtụtụ ngwaọrụ dị ka o kwere gụnyere music ọkpụkpọ, mobile internet, egwuregwu, arụpụtaghị ngwá ọrụ na a ekwentị, n'ezie. Dị ka na-adọrọ mmasị dị ka ha bụ ndị ka ọtụtụ nke na-eji ọkụ, na price nwere ike ghara ịbụ dị ka ọnụ maka onye ọ bụla. Ya mere, gịnị bụ ihe ngwọta? Ọ bụrụ na a ohuru iPhone bụ ihe i nwere ike imeli adịghị na-emechu ihu dị nnọọ ma. E nwere ihe ọzọ na nhọrọ ma ọ na-ịzụ a Mmanu iPhone. Nke a nwere ike maa bee-akwụ ụgwọ, ma o nwere na-kwetara na e nwere ụfọdụ n'ihe ize ndụ. E nwere kpọmkwem uru na ọghọm ka ịzụ a Mmanu iPhone. Ị kwesịrị ị na-enyocha ihe niile ha na-eme mkpebi ndị dabeere na na.
Anyị ga-agwa gị ihe niile banyere ndị cons na Uru na Atụmatụ tụlee mgbe-achọ ezi niile na a Mmanu iPhone.
The Uru nke Ịzụ a eji iPhone
The ụkọ ihe ụfọdụ n'ihi na Ịzụ a eji iPhone
Olee otú iji Lelee a eji iPhone na àgwà
Best Ebe Zụrụ / ere iPhone na America na Canada
Ahịa List maka Iji iPhones
1. Mbụ, onye kasị ukwuu uru nke ịzụ a Mmanu iPhone bụ doro anya na a nnukwu ihe dị iche na price. Ị nwere ike ịchọta eji ndị ọkara nke price nke ndị ọhụrụ na ụfọdụ n'ime ha e ji naanị n'ihi na a ọnwa ma ọ bụ abụọ. Gịnị mere na-akwụ ọtụtụ narị dollar mmezi mgbe e nwere dị ọnụ ala karịa nhọrọ? Nke a bụ ajụjụ na ọtụtụ ga-enwe ike ịza. N'ihi na ụfọdụ ọ pụrụ ịbụ eziokwu na ha na-achọ ndị Kacha ọhụrụ ụdị, ma e nwere amụọ na ndị dị ka mma. Ị dị nnọọ nwere mara ebe anya.
2. ezie na ụfọdụ "Apple riri ahụ" ịhụ mwepụta nke a ọhụrụ iPhone dị ka ihe omume nke afọ ma dị njikere na-eguzo na akara ruo ọtụtụ awa na-akpa onye na ọhụrụ nlereanya, ndị ọzọ na-ahụ ya dị ka ohere iji na-enweta kasị mma ndibiat na ndị okenye na nsụgharị. Na oge a, ndị ahịa n'ihi niile gara aga iPhone ụdị dobe adi na ọ bụ ihe niile ruru ka-adịru nwa oge sensashion banyere ihe ọhụrụ. Ọtụtụ na-agbalị na-ere ha iPhones, ndị bụ n'ezie ndị na oké ọnọdụ, ka anya dị ka omume nanị iji kwalite ya ndị ọhụrụ. Nke a bụ gị ohere iji nweta ihe kasị mma ndibiat na-eji iPhone.
3. Mgbe enyocha maka ala ọnụ iPhone, ị nwekwara ike na-kpuo ìsì site niile mgbasa ozi si dị iche iche Jeriko. Ha na-enye ọhụrụ iPhones maka a price na yiri ka nnọọ obere ego kwa ọnwa, ma mgbe ọ niile na-agbakwụnye elu ndise agbanwe kpamkpam. Ịzụ a eji iPhone bụ gị ohere iji kwụọ ụgwọ obere maka chọrọ ngwaọrụ enweghị ịbanye a ogologo oge nkwekọrịta. Ị na-akwụ ihe niile tupu, si otú e nweghị ohere nke na-ghọgburu, ọ dịghị zoro ezo ụgwọ, mmezi ụgwọ ma ọ bụ ihe ọ bụla yiri nke ahụ. Plus, gị mgbe ihe ọdịnihu ga-abụrụ unu; nwere a akwugo ugwo ekwentị nwere ike atụgharị si ga-ihe n'ezie wetara mgbe e mesịrị.
4. Ọzọ uru nke ịzụ a Mmanu iPhone bụ na ha na-ama a nwalere si. Old ụdị undergone nile di iche iche nke software patches na ndozi. Ihe na ọhụrụ iPhones bụ na ha nwere ike anya adọrọ nnọọ mmasị, ma ha na-emekarị na-ata ahụhụ si dị iche iche oru metụtara na otutu software na nnukwu ntọhapụ. E nwere kpọmkwem ukpụhọde oge na mmepe mkpa zuru okè ngwaahịa. Eziokwu ahụ bụ na ekwentị e ji mee nke a mgbe bụ gị nkwa na ọ gafere ikpe oge na undergone niile dị mkpa ndozi na-kpamkpam ọtọ.
5. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, mgbe ịzụrụ a Mmanu iPhone ị maara kpọmkwem nke nlereanya ị na-ịzụ na ya niile cons na Uru. Mgbe ịzụta na ekwentị nnukwu ụlọ ahịa ma ọ bụ online si emeputa, ị nanị bulie a nlereanya, ị na-enweghị akara n'elu nke ngwaọrụ kpọmkwem ha na-aga na-enye gị. The-ekwu bụ na na Mmanu iPhone ị ga-esi na-agbalị ya ọrụ tupu na-akwụ ụgwọ maka ya. Ị nwere ike ịkpọtụrụ na-ere ere, izute ya na lelee ngwaọrụ maka niile flaws, ọ bụrụ na e nwere ihe ọ bụla. Otú a ị ga-amarakwa kpọmkwem ihe ị na-akwụ ụgwọ gị ego gị maka.
Full akwụkwọ ikike Lower Ahịa
Kacha ọhụrụ atụmatụ Ọ dịghị zoro ezo ụgwọ
Full-ndụ Battery Ọ dịghị ogologo oge nkwekọrịta
Ibu ebe nchekwa Ama odomo na tweaked nlereanya
1. The kasị ukwuu mwepu mgbe ịzụrụ a Mmanu iPhone bụ eleghị anya akwụkwọ ikike nke. New iPhone na-emekarị na-abịa na a pụrụ ịtụkwasị obi akwụkwọ ikike na free ọrụ ụgwọ. Ị na-isiokwu nnọchi nke ngwaọrụ bụrụ na nke izute ọ bụla esịtidem nkwarụ ke akpa 2 ọnwa oge. Ihe niile a na-ekwe nkwa site a emeputa, na nke a Apple, na i nwere ike inwe obi ike na ị ga-enweta a àgwà na ị na-akwụ ụgwọ maka. Ụfọdụ n'ime eji iPhones nwere ike warranties ka nke ọma, ma ha agaghị abụ dị ka ogologo oge dị ka ndị nke ọhụrụ. Ha nwere ike ịbụ ka obere ka 15 ụbọchị ...
2. Mgbe aga n'ihi a eji iPhone kasị nke nhọrọ bụ ndị okenye ụdị. Ya mere, ị kwesịrị ị na-aghọta na ị na-achụ àjà ụfọdụ atụmatụ mgbe ịzụrụ a eji iPhone. Okenye ụdị adịghị nwere otu software ọganihu na innovations ka kacha ọhụrụ n'anya. The eji iPhone na ị na-ezubere iche nwere ike ọ gaghị poses atụmatụ dị ka olu-achịkwa Siri, 3G ọsọ, GPS, elu àgwà igwefoto, Nike +, wdg Ya mere, tupu ịzụrụ ihe okenye mbipute nke iPhone ijide n'aka na ị gaghị-emechu ihu mgbe ị na-ezute na ọ bụghị ihe niile na ngwa ọdịnala na-agba na gị nlereanya.
3. Battery kwesịkwara kwuru mgbe ekwu okwu banyere ọghọm nke ịzụ a eji iPhone. Batrị nke iPhone na-akpaghị aka depletes na nọgidere na-eji; a bụ n'ihi na batrị technology na ngwaọrụ. N'ụzọ dị mwute, ọ bụ nnọọ ihe ike ịghọta ma ekwentị gị na-banyere ịzụta nwere a mebiri emebi batrị ma ọ bụ; N'ihi ya, ọ bụ oké mwepu. All ị pụrụ ime bụ-akwadebe na a na-eji iPhone ga, kasị eleghị anya, ọ bụghị nwere otu lifespan dị ka ọhụrụ otu. Ndị okenye ihe nlereanya, ibu bụ ohere nke agwụcha elu na a ogbenye batrị.
4. ọzọ eziokwu na lowers price maka Mmanu iPhones bụ na ndị okenye ụdị na-emekarị nwere obere ebe nchekwa na siri ike mbanye ohere. Nke a pụtara na ekwentị gị ga-enweghị ihe dị ukwuu nchekwa dị maka ngwa, egwu, egwuregwu, foto, na fim, wdg dị ka ọhụrụ ụdị. Ihe dị iche nwere ike ịbụ dị ukwuu dị ka 28 GB. Ị kwesịrị ị na-atụle otú mkpa ego bụ maka ị tụnyere ike nke ekwentị gị. Nke a bụ eleghị ndị kasị njọ akụkụ maka ndị nwere nnukwu music album collections na ga-achọ ka ya na ha ebe ọ bụla ha na-aga.
5. ọzọ mwepu na onye ọ bụla nwere ike ịhụ na-enweghị ihe ọmụma dị ukwuu banyere ngwaahịa bụ visual n'akụkụ. Mmanu iPhones-emekarị nwere dị iche iche ịchọ mma ntụpọ. Ụfọdụ n'ime ha bụ ike na-achọpụta mgbe ịzụta ya, ebe ndị ọzọ na ibu na ndị ọzọ doro anya. Nke a pụrụ ịbụ nsogbu n'ihi na ndị na-akwụ ụgwọ dị ukwuu anya ka ọdịdị. Ihe dị mkpa n'ezie bụ na e nwere mba emebi na ihuenyo ya. Dị ka iPhone nwere touchscreen maka akara, ọ bụla ọkọ na ihuenyo pụrụ ịbụ nnọọ nsogbu. Scratches na ihuenyo nwere ike ghara ịbụ anya si photos mgbe ịzụta online, otú e nwere bụ nnukwu n'ihe ize ndụ.
Olee otú Lelee a eji iPhone na àgwà
1. Olee otú iji ego iPhone akwụkwọ ikike?
Ọ dị mkpa ka ego na akwụkwọ ikike mgbe ịzụrụ a eji iPhone. Nke a bụ n'ezie mfe ime na ohere internet na Oghere Usoro ọgụgụ ma ọ bụ IMEI nke ngwaọrụ. Ị nwere ike ịhụ nke a Ama n'azụ SIM tree. I nwekwara ike ịhụ Oghere Usoro ọgụgụ site ịkwụnye ngwaọrụ ke iTunes ma na-aga Ngwaọrụ nchịkọta. Otu ihe nhọrọ bụ ego ya site na ngwaọrụ gị; Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> Gbasara> Serial Number. Ozugbo ị matara ihe Oghere Usoro ahụ nọmba ị ga-aga Apple si ukara website: https://selfsolve.apple.com/agreementWarrantyDynamic.do, na-etinye gị na ekwentị Oghere Usoro ọgụgụ ke "Tinye ngwaike Oghere Usoro ọgụgụ" igbe na pịa-anọgide na. Ị ga-ahụ ihe dị ka nke a gasiri:
2. Olee otú iji ego ebighị ụbọchị?
Mgbe ịzụta a Mmanu iPhone, ị ga-achọ ego ya ebighị Ụbọchị na-abịa ka a ọnụ ọgụgụ nke ndị ọzọ Mkpebi na-enyere gị aka ikpebi ma ma ọ bụ ịzụta na nlereanya. The ebighị ụbọchị gị iPhone bụ na-emekarị nso ma ọ bụ ahụ dị ka akwụkwọ ikike. Ị pụrụ ịkpọ Apple na 1800-MY-iPhone na ịjụ banyere ebighị ụbọchị nke ekwentị gị. I nwekwara ike ego ya site Oghere Usoro ọgụgụ ma ọ bụ nọmba IMEI nke ngwaọrụ site na iji otu ụzọ anyị kwuru n'elu.
Dị ka anyị kwuru, nke atọ akụkụ, "Ndozi na Service mkpuchi" na-egosi na expriration ụbọchị nke otu afọ akwụkwọ ikike. Ya mere, ọ bụrụ na i bu n'obi imecha December 7, 2011, mgbe ahụ, gị iPhone e ọrụ dị na December 7, 2010.
3. Olee otú iji ego iPhone netwọk ụgbọelu
Iji zere mmezi isi ọwụwa, ị ga-kama azụ otu iPhone na ugbua na-arụ ọrụ na netwọk na ị na-ugbu a na-eji. Ị nwere ike Ị kpọghee ekwt ngwaọrụ ma ọ bụ ịgbanwe ụgbọelu, ma ọ bụrụ na ị chọrọ ihe nile na-aga were were mgbe ahụ ego netwọk ụgbọelu nke ngwaọrụ. Ebe a bụ otú ime na: na-aga http://www.imei.info na-abanye na nọmba IMEI gị na igbe nyere. Ị ga-ahụ na-ahụ yiri Ama:
Pịa "Tulee netwọk & simlock" na ọ ga-egosipụta dị iche iche ozi (IMEI, Part Description, Product Version, akwụkwọ ikike Period, ụgbọelu Ama, SIM mkpọchi ọnọdụ) na ngwaọrụ gị gụnyere nke ụgbọelu ngwaọrụ gị na-ekpochi na.
4. Olee otú ịhọrọ kasị kwesị ekwesị nlereanya ka gị mkpa?
The echiche bụ isi bụ na ndị okenye nlereanya bụ, dị ọnụ ala karịa ọ na-efu. Nke atọ bụ, mgbe ịzụrụ a Mmanu iPhone, ị kwesịrị ị na ịchọ a nlereanya na kemgbe si na ahịa ihe a afọ. Ndị ahịa dị otú ahụ ụdị na-ama ama esịn, ma ọ na-nwere serviceable akụkụ. Ị kwesịrị ijide n'aka na ọ bụrụ na ihe na-eme na ngwaọrụ gị, e nwere ga-adị mkpa akụkụ dị idozi ya. Mgbe ụfọdụ okodu a obere ihe pụrụ ịzọpụta gị site nnọọ ukwuu mmefu e mesịrị na. Ị nwere ike ịlele mmepụta ụbọchị nke ekwentị site na ịga na Isetịpụ> Ozuruọnụ> Gbasara
5. Olee otú iji ego ọnọdụ nke batrị?
Anyị na-ama na-ekwu banyere mkpa nke batrị ọnọdụ mgbe ịzụta a eji iPhone. Ọ bụ ike ịchọpụta ma batrị na-ọma chebere ma ọ bụ na a obere oge, ma ị ka nwere ike ịchọpụta ụfọdụ Ama na na. Ọ bụrụ na ị nwere ụbọchị ma ọ bụ abụọ ka ịlele iPhone batrị, mgbe ahụ, na-ana ya zuru na-eji ya ka ị ga-ejikarị eme ịhụ otú ogologo ọ dịruru. Ebe a bụ otu ụzọ ị pụrụ iji ego batrị na a mkpumkpu oge. Gaa na Ntọala> Ozuruọnụ> ojiji. Ị pụrụ ịhụ n'ebe otú oge agafeela kemgbe ikpeazụ zuru ụgwọ na-abịa ụfọdụ nkwubi okwu.
6. Olee otú iji ego ngosi maka nwụrụ anwụ pikselụ?
Nwụrụ anwụ pikselụ na agba mbipụta bụ ihe ọzọ na i kwesịrị ịdị na ego mgbe aga n'ihi a Mmanu iPhone. I nwere ike na-eche na a nwụrụ anwụ pixel ma ọ bụ abụọ ga ghara ọbụna-anya mgbe niile, ma gịnị mere na-ego? E nwere ọtụtụ ngwa ọdịnala dị na ike ime nke a n'ihi na ị. Ha ichoputa retina ngosi arụmọrụ na izi ezi. I nwekwara ike na-aga http://iphonedpt.awardspace.com/ na soro ntuziaka ka ego ma ngwaọrụ nwere ọ bụla nwụrụ anwụ pikselụ ma ọ bụ. Ma ihe ndị ikanam backlight, ị nwere ike nwalee ya site na-adọkpụpụta ihie mmịfe site n'otu nsọtụ ọzọ na ọnụ ọgụgụ.
7. Olee otú iji ego mputa maka mkpa flaws?
Ezie na ụfọdụ scratches nwere ike ghara ịbụ mkpa, ị kwesịrị ị na ntị ka anya gaps, iko cracks, ma ọ bụ omume rụrụ nkwonkwo. Ha nwere ike na-a ihe mere ịtụfu gị iPhone. Jide n'aka na ngwaọrụ bụ siri ike; n'ihu ma n'azụ iko kwesịrị n'ụzọ zuru ezu megide igwe anaghị agba nchara poolu gbalaga. The nsogbu na gaps bụ na ha na-eme dị ka pivot ihe na belata bughi ike n'ezi ihe nke iko. N'ihi ya, na ngwaọrụ bụ nnọọ ezi uche na tụlee. Ha na-ekwe ka ájá n'ime ekwentị. Iji na-enyocha mputa nke iPhone jide ya saidwees ma na-etinye ike ìhè si ndabere. Ọ bụrụ na ị na-achọpụta ihe dị ka nke a, mgbe ibugharịa na-esote nhọrọ.
8. Olee otú iji ego igwefoto?
Firstly, lelee na shutter nke ma, n'ihu ma n'azụ ese foto. Ọ ga-emeghe ma na-emechi oge ọ bụla ị na-ese foto. Mgbe ahụ, ịhụ igwefoto na a vasatail idaha na enweta na-elekwasị anya na-elele atụmatụ. Igwefoto kwesịrị ịgbanwe na-elekwasị anya na ihie dabeere na ebe ị na-enweta. Ozugbo i iwere a foto, nyochaa ya pixellation, banding, achagharị, glaring, wdg Ọ bụrụ na e ọ bụla nke ndị a okwu, ọ ga-doro anya. Echefukwala nwalee video igwefoto dị ka nke ọma; ego maka stuttering, playback nke ụda. Ikpeazụ, ma ọ dịghị ihe ọzọ, nwalee Ikanam flash wires site na ịme ọpịpị elu akaekpe nke ihuenyo ruo mgbe flash ọnọdụ na-agụ "na."
9. Olee otú iji nwalee touchscreen?
Mgbe ịzụ a Mmanu iPhone, i kwesịkwara ego touchscreen ọma site abụọ ngwa ngwa ụzọ. Jide n'aka na e nwere ndị mba nwụrụ anwụ tụrụ na ekwentị gị na-banyere ịzụta. Ị pụrụ ime ya, site na imeghe a na omume nke na-anabata ederede ọsọ ọsọ, Notepad ihe atụ; pịnye ke "The ngwa ngwa aja aja Fox jumps n'elu umengwụ nkịta" iji niile atọ dee Nkuzi Nnabata: Eserese, odida obodo na n'ụlọ button na ekpe, na odida obodo na n'ụlọ bọtịnụ na nri. Nke a bụ oké ụzọ ego ma e nwere ọ bụla nwụrụ anwụ ihe ma ọ bụ ọ. Swiping nwere ike-enyocha site mmeghe ndị Photo ngwa, na-ahọpụta ọ bụla foto, zooming na, na swiping mkpịsị aka gị nile na ihuenyo. Ọ bụrụ na foto na-akpali gburugburu flawlessly, mgbe ahụ, ihe niile dị mma.
10. Olee otú iji ego headphone jaak?
Mgbe ịlele ahụ headphone Jack nke iPhone jide n'aka na ozugbo plugged na, e nwere nnọọ ihe ọ bụla wigul na Jack. Play ụfọdụ media na ego ma ọ bụrụ na ụda a nụrụ na ma ekweisi. Ọ bụrụ na e nwere nsogbu, na-agbalị ọzọ headphone setịpụrụ dị ka nke ọma tupu jumping ọ bụla nkwubi okwu. Nsogbu nwere ike ịbụ na ekweisi. Ule ma ọ bụrụ na headphone njikwa (play / kwụsịtụ, track-atụ / azụ, Voice N'ime, olu elu / ala) arụ ọrụ nke ọma.
1. eBay - eBay nwere oké aha mgbe ọ na-abịa ịzụ Mmanu iPhones. Ya mgbe niile awade nnukwu nhọrọ nke ngwaahịa. Ọ bụrụ na ị na-ezere scammers, mgbe ahụ, nke a bụ otu n'ime ndị kasị mma nhọrọ.
2. Amazon - Amazon na-awade nza nke Mmanu iPhones maka ire nnọọ ihe oké ọnụ price. Ha na-emekarị na-eresị site ọzọ na-ere ákwà. Dị nnọọ ego ha nzaghachi na-ekwu na ndị fọdụrụ dị mma.
3. Best Buy - Best Buy nwere obere nhọrọ mgbe ahụ Amazon na eBay, ma ọ nwere uru mgbe ọ na-abịa ahịa. Ha ego Mmanu iPhones nnọọ ala.
4. AT & T - i nwere ike ịhụ a Mmanu iPhone na mpaghara gị AT & T ahịa ma ọ bụ na ha na website - http://www.att.com/shop/wireless.html. Ha na-enye ngwa ngwa na a pụrụ ịdabere na mbupu. Ọ nwere ike ịbụ ọnụ ala nhọrọ, ma maa otu n'ime ndị kasị pụrụ ịtụkwasị obi.
5. NextWorth - ọ bụ otu nke ama mgbanwe ụlọ ọrụ mgbe ọ na-abịa azụ ahịa Mmanu iPhones. Ha na-enye kama na-adọrọ adọrọ ahịa na http://www.nextworth.com.
6. Sprint - Sprint bụ nnọọ yiri ka Best Buy. Ọ bụ ihe ọzọ ezigbo ebe ina-eji iPhone maka kasị ala price na internet. Dị iche bụ na Sprint adịghị enye nhọrọ nke ịzụ ihe ngwaọrụ enweghị a ọrụ nkwekọrịta.
7. CowBoom - ọ bụ a ofu price na saịtị na udu a obere elu ebe a. The gbakwunyere bụ na ha emekarị na-enye a nloghachi iwu.
8. GameStop - The ezi akụkụ banyere GameStop bụ na ha na-ada n'azụ ha na ngwaahịa. Ha na-anwale ma na-ekwe nkwa na-arụ ọrụ. Ọ bụrụ na nke a bụ bụghị ikpe, i nwere ike ịlaghachi ya n'ime 7 ụbọchị ma na-gị ego gị azụ.
9. Buy My Tronics - ha website usability nwere ike ghara ịbụ dị ka nke asọmpi ', ma ha maa eguzo na ha àgwà ahịa ọrụ.
10. Obodo ere ákwà - Obodo na-ere ákwà na-agụnye ndị enyi gị na ndị enyi ha. The ezi ihe banyere obodo na-ere ákwà bụ na ị na-esi jide ngwaọrụ na ego niile mkpa atụmatụ tupu ịzụrụ ya.
eBay http://www.ebay.com/ Auction Na-adabere na-ere ákwà na PayPal Awade auctions
Amazon http://www.amazon.com/ Site $ 100 Na-adabere na-ere ákwà na Kasị Isi ịkwụ ụgwọ Nhọrọ Ama na ere ákwà
BestBuy http://www.bestbuy.com/ Site $ 300 2-8 Days American Express, Visa, MasterCard, PayPal na BestBuy nhọrọ Naa nhọrọ
AT & T http://www.att.com/ Site $ 300 7-14 Days Kasị Isi ịkwụ ụgwọ Nhọrọ Naa nhọrọ
NextWorth http://www.nextworth.com - Na-adabere na-ere ákwà na Kasị Isi ịkwụ ụgwọ Nhọrọ Awade Exchanges
Sprint http://www.sprint.com/ - - MasterCard, Visa, American Express. Discover, ụlọ nri si Club Service Agreement a chọrọ
CowBoom http://www.cowboom.com/ Site na $ 80 2-7 Days PayPal, Amazon ndenye ọpụpụ, MasterCard, Visa, American Express Discover Awade nloghachi iwu
GameStop http://www.gamestop.com/ Site $ 50 2-5 Days Kasị Isi Ịkwụ Ụgwọ Nhọrọ Ego na-azụ nkwa
BuyMyTronics http://www.buymytronics.com/ Auction Na-adabere na-ere ákwà na PayPal, Tulee A + ahịa Ọrụ
Na nchịkọta, ịzụ a eji iPhone bụ oké ụzọ zọpụta ọtụtụ narị dollar. Otú ọ dị, ị kwesịrị ị na-adị njikere maka ihe niile ọghọm nke nwere ike na-abịa na ya. Jisie ike!
Min nke Ahịa
Max nke Ahịa
Isi Iyi: 2014, March on eBay